Oge Azumazu Istanbul 2019 | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulIstanbul Metro Hours 2019
10 / 11 / 2019 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Maps, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
Istanbul Metro Hours 2019: Na njedebe nke afọ 2030, na owuwu ụzọ ụgbọ oloko ahụ amalite site na afọ na-esote Ogwe 776 Istanbul ga-abụ netwọ ala ụzọ ụgbọ ala nke abụọ kachasị ogologo n'ụwa niile kemgbe New York. Gụọ akụkọ anyị gbasara Istanbul Metro Hours 2019
Istanbul metro oghere mmeghe: 06: 00 - 00: 00
Dabere na Master Master, a ga-agbakwunye eriri ọhụrụ 2019 metro na Istanbul na njedebe nke 19. Ogologo nke netwọk ígwè nwere ahịrị ndị a ga-adị ihe dịka 400 kilomita. Site na ahịrị ohuru nke 2019 nke a ga-ewu mgbe 24 gasịrị, ezubere ogologo nke metro na 2030 ezubere ịbụ kilomita 776 na Istanbul. Yabụ, Istanbul ga-abụ obodo nke abụọ na ụwa na-esote New York, nke nwere ogologo dịka 800 kilomita nke ahịrị metro. Na nhazi nke eji Marmaray rụọ ọrụ nke ọma, eriri metro sitere na Kartal ruo Atatürk Airport na 2014, site na Pendik ruo Bağcılar na 2015 na site na Tuzla ruo Küçükçekmece na 2016 ga-arụ ọrụ na ndị bi na Istanbul.
Istanbul Metro Map: E gosipụtara nkọwa niile na Istanbul Metro Map ma pịa na map maka nnukwu map nke Istanbul Metro Map. Maapụ bụ maka ihe ọmụma na ndị nwe ha ga-akpọtụrụ ha. Istanbul Metro E depụtara ihe oyiyi foto na pịa ka ibu. Nakwa nke nha mbụ Istanbul Rail Systems Map ebe a. I nwekwara ike iji map anyị na-emekọrịta ihe na usoro igodo gị.
usoro ntaneti nke istanbul
Istanbul Metro nke ga-arụ ọrụ ruo 2019
Ihe Mbụ Mbụ - Metreüstü Metro: 2015
Osimiri Kartal - Pendik E5 - Sabiha Gökçen Airport Subway: 2017
N'ime usoro ihe omumu ohuru, Otogar - Kirazlı - Bağcılar - Başakşehir Metro mepere n'ọnwa June. Takimim - Golden Golden - Yenikapı Metro ga-arụ ọrụ afọ a. Na mgbakwunye, n'okpuru Marmaray Yenikapı - Sirkeci - Uskudar olulu na-emeghe afọ a.
Na Metro Istanbul, Cleanest Metro, Na-edebe Mmanụ Dị Ọcha
Airportgbọ elu ọdụ ụgbọ elu Istanbul-Gayrettepe dị na 2019…
2019 Metro Line a ga-emeghe na Istanbul na 5 Afọ
Map nke 2019 Istanbul Metro
2019 afọ istanbul okporo ígwè map
3. Usoro ụgbọ okporo ígwè ụgbọ elu
4.Nọzọ ụzọ ụgbọ oloko
Istanbula ọhụrụ metro line
Ihe omumu oru ohuru na Istanbul
ụzọ ụgbọ oloko elu
Edirnekapı - Akwukwo Igbo
Ọdịnihu nke Istanbul Metro Map 2019
Göztepe Bagdat n'okporo ámá - Göztepe E5 - Ataşehir - Ümraniye subway
Halkalı - Stadium Olympic - Kayabaşı - Kayaşehir - 3. Airport Metro
Halkalı - Ogige egwuregwu Olympia - Kayabasi - Kayasehir - 3. Airport Metro
Usoro ụgbọ okporo ígwè ụgbọ elu
Map ọhụrụ maka Istanbul 2019
ogologo oge metro na istanbul
istanbul metro oru ngo
istanbul ọhụrụ metro
istanbul ọhụrụ metros
ụzọ ụgbọ ala na istanbul
Kpọtụrụ Kadir ozugbo
Map nke Kayasehir Metro
System Metro Rail System Kayabaşı
usoro usoro okporo ígwè
Ebe - Halic Metro
Metro na Unkapanı
New map nke Istanbul
ọhụrụ steeti istanbul
arụ ọrụ ọhụrụ metro
Ntuziaka ọhụrụ - Haliç Project
Ụlọ Yenikapi Metro